တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက် - Home | Facebook
See more of တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက် on Facebook
100,192 people like this
100,179 people follow this
+959250 005 174
Page အချင်းချင်း ချိတ်ဆက် ကြော်ငြာလိုသူများ အတွက်
Nyisay Myanmar Ebook Creator
တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက်
တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက် reached 100,000 likes!
ကိုယ် ရှင်သန်ရာ ဘဝ မှာ
ကိုယ်က အတော်ဆုံး အကောင်းဆုံး ဖြစ်နေဖို့ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့
ပူပူလောင်လောင် ရုန်းကန် ကြိုးစားမလား ?
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပဲ သေချာ ပြန်ဆန်းစစ်နေပြီး
မနေ့ကထက် ပိုတော် ပိုကောင်းအောင်
အေးအေးချမ်းချမ်း ကြိုးစားနေမလား ?
လူငယ်တွေ အတွက် ပါ ။
၁။ Specialists ( တစ်ခုတည်းကို သေချာ သိသူ ) အနေနဲ့ အောင်မြင်အောင် လုပ်မလား ?
၂။ Generalist ( အားလုံး နည်းနည်းသိ သူ ) အနေနဲ့ အောင်မြင်အောင် လုပ်မလား ? ...
၃။ Specialist တစ်နေရာမှာ ဖြစ်အောင် လုပ်ပြီး Generalist ကို တဖြည်းဖြည်း ကူးမလားဆိုပြီး
ရွေးချယ်စရာ ၃ ခု ရှိနေနိုင်တယ် ။
၂ ကို ရွေးမိတာ လမ်းမှားသွားတယ် ။
ဒါနဲ့ ၃ ကို ပြန်ရွေးလိုက်တာ
အခုတော့ အဆင်ပြေစ ပြုလာတယ်ပေါ့ ။
( တကယ်က လောလောဆယ်
၁ နဲ့ ၃ ကြားမှာပဲ ရှိသေးတာပါ )
ဒီတော့ ကိုယ့်ဘဝမှာ ရေရှည် ရည်မှန်းချက် တစ်ခုခု
စီမံကိန်း တစ်ခုခု ဆွဲတော့မယ် ဆိုရင်
အဲ့ ၃ ခုမှာ ကိုယ်နဲ့ ကိုက်တာ
ကိုယ့် ဘဝရဲ့ လက်ရှိ ပေးထားချက်တွေနဲ့ ကိုက်တာကို
သေချာ ရွေးထားမိဖို့ လိုပါတယ် ။
မဟုတ်ရင် ထိုက်သင့်သလောက် မရွေ့တော့
လမ်းမှန်သွားရင်ကျတော့ အစ ပိုင်း ပင်ပန်းပေမယ့်
တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက် shared Zin Zae Lwin's post.
ကျန်းမာရေး နှင့် အားကစား ဝန်ကြီးဌာနသို့
ပြန် တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။
Zin Zae Lwin added9new photos.
ဆရာ ကို Thurein Hlaing Winတင်ထားတဲ့
H1N1 နဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အကြောင်း
ရေးသားထားတာတွေကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဗျာ ။
အကြောင်း အရာကလည်း သိသင့်တာမို့
ထပ်မံ ဖြည့်စွက် တင်ပေးထားပါတယ်
လက်ရှိမှာ ကူးစက်ပြန့်ပွားနှုန်းမြင့်မားနေတဲ့ ၀က်တုပ်ကွေးရောဂါ (H1N1) အကြောင်း သိသင့်သမျှအပြည့်အစုံ။
H1N1!!! အရမ်းတော့ အကြောက်မလွန်ပါနဲ့ ဒါပေမယ့် ပေါ့ဆလို့မရပါဘူး။
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ သံသယဖြစ်ဖွယ် ရှိနေတဲ့ H1N1 ခေါ် ၀က်တုပ်ကွေး(swine flu) ဆိုတာက ရောဂါအသစ်တစ်မျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိမှာတော့ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးအရေးပေါ်ဌာနမှာ ၀က်တုပ်ကွေးလို့ အတည်ပြုနိုင်တဲ့ လူနာနှစ်ယောက်တက်ရောက်ကုသနေပြီး ဆက်လက်ပြန့်ပွားဖို့လည်း အလားအလာရှိနေနိုင်တယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက် ၀က်တုပ်ကွေးနဲ့ပတ်သက်လို့ သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ကြိုတင်သိရှိကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။
-ဘယ်လိုကုသလဲ ဆိုတာတွေကို ဆက်လက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၀က်တုပ်ကွေးခေါ် swine flu (H1N1) ဟာ ၁၉၁၈ ခုနှစ် မက်ဆီကို နိူင်ငံမှာ စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ရိုးရိုးတုပ်ကွေးအမျိုးအစားမှ ဗီဇပြောင်းအသွင်ကွဲထွက်လာတဲ့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်ရောဂါသဖွယ် ရာစုနှစ်အလိုက်ဖြစ်ပွားတတ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခု၂၀၁၇ မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ စတင်ဖြစ်ပွားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
H1N1 သို့ ၀က်တုပ်ကွေး (swine flu)ဆိုတာ ဘာလဲ။
H1N1 တုပ်ကွေး တစ်နည်းအားဖြင့် ၀က်တုပ်ကွေးလို့ ခေါ်တဲ့ ရောဂါကို H1N1 ဆိုတဲ့ virus ကြောင့်ဖြစ်ပွားစေပါတယ်။ ဒီ virus ဟာ တုပ်ကွေးvirus (influenza virus)ရဲ့ မျိုးစိတ်အသစ်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန် တုပ်ကွေးရောဂါအမျိုးအစားကဲ့သို့ လက္ခဏာတွေပြတတ်ပါတယ်။ လက်တလောမှာတော့ H1N1 virus ဟာလူတွေမှာ ရာသီတုပ်ကွေးအနေနဲ့ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ၀က်တွေမှာ ရှင်သန်နေထိုင်နိုင်တဲ့ virus ပိုးဖြစ်သော်လည်း သေချာချက်ပြုတ်ကိုင်တွယ် ထားတဲ့ ၀က်သားနှင့် တခြားသက်ဆိုင်ရာ စားသောက်ကုန်တွေ စားခြင်းဖြင့်တော့ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
၀က်တုပ်ကွေးဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ လူတွေမှာစတင်တွေ့ရှိပြီး ကူးစက်ပြန့်နှံ့မှု ဖြစ်ပွားရာကနေ သတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ ကူးစက်ပြန့်နှံ့ရောဂါဆိုတာဟာ တစ်ချိန်တည်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံး သို့ တိုက်နယ်အများအပြားမှာ ကူးစက်ပြန့်နှံ့ပြီး ဖြစ်ပွားတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။
၀က်တုပ်ကွေး ဘယ်လို ကူးစက်သလဲ။
H1N1 တုပ်ကွေးဟာ ၀က်တွေမှာသာ ကူးစက်တတ်တဲ့ တုပ်ကွေးvirus မျိုးစိတ်အသစ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ တိုက်ဖိုက်နဲ့ မတူတာက သန်းတွေ၊ မှက်တွေကနေ ကူးစက်တာမဟုတ်ပဲ လူကနေ လူကိုသာ ကူးပြီး တိရိစ္ဆာန်ကနေလည်း လူကို မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
H1N1 တုပ်ကွေးက အလွန်ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။ရောဂါပိုးဟာ တံတွေးနှင့် ချွဲတွေအမှုန်တွေကနေ ကူးစက်ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။လူတွေမှာ အောက်ပါနည်းလမ်းတွေနဲ့ ပြန့်နှံ့နိုင်ပါတယ်။
• ရောဂါပိုးရှိတဲ့ နေရာကိုကိုင်တွယ်မိပြီး မျက်လုံး သို့ နှာခေါင်းတို့အား ကိုင်မိခြင်း
လူတွေ နှာချေ၊ ချောင်းဆိုးတဲ့ အခါမှာ လေထဲကို မျက်စိနဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ virus အမှုန်အမွှားတွေ ပက်ဖြန်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ အကယ်၍သာ သင်ဟာ ၄င်းအမှုန်တွေကို အမှုန်ကျနိုင်တဲ့နေရာ (တံခါးလက်ကိုင် သို့ ဘေစင်တွေ)နဲ့ ထိတွေ့မိတာ သို့ ရောဂါပိုးရှိတဲ့သူထိတွေ့ထားတဲ့ အရာကို ကိုင်မိတာ၊ထိမိတာတွေ ကြောင့် H1N1 တုပ်ကွေးရောဂါကို ကူစက်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ရောဂါလက္ခဏာတွေ မပြခင်တစ်ရက်ရက်မှာ ပြန့်နှံ့စေနိုင်သလို ဖျားနာပြီး ၇ ရက်အတွင်းမှာလည်း ပြန့်နှံ့စေနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကတော့ ၁၀ ရက်လောက်ထိကို ကူးစက်နိုင်ပါတယ်။
၀က်တုပ်ကွေးဆိုတဲ့ နာမည်အရတော့ သင်ဟာ ၀က်ကင်၊ ၀က်ပေါင်ခြောက် သို့ တခြားဝက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ စားပြီးတော့ မကူးစက်နိုင်ပါဘူး။
သင့်ဆရာဝန်က သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရည်နမူနာတစ်ချို့ယူပြီး စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး ရောဂါရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ နမူနာယူဖို့ရန် ဆရာဝန် သို့ သူနာပြုဆရာမက သင့်နှာခေါင်း သို့ လည်ချောင်းတွင်းမှ ဂွမ်းစနှင့် အရည်ကို သုတ်ယူပါလိမ့်မယ်။ ပြီးနောက် ၄င်းသုတ်ယူထားတဲ့ အရည်နမူနာအား မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာနည်းလမ်းတွေ နှင့် ဓာတ်ခွဲနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးသုံးပြီး virus အမျိုးအစားကို အတိအကျ ခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်
၀က်တုပ်ကွေး သို့ H1N1 တုပ်ကွေး ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
၀က်တုပ်ကွေးလူနာအများစုကတော့ ကုသမှုမလိုအပ်နိုင်ပါဘူး။ သင့်တုပ်ကွေးကနေ နောက်ဆက်တွဲတွေ ဖြစ်လာနိုင်ချေမရှိရင်တော့ ဆရာဝန်တောင်ပြစ၇ာ မလိုပါဘူး။ သင်ဟာ လက္ခဏာတွေ သက်သာလာအောင်နှင့် တခြားလူတွေကို မပြန့်နှံ့နိုင်အောင် သတိထားကာကွယ်စောင့်ရှောက်သင့်ပါတယ်။
၀က်တုပ်ကွေးကို ကုသရန် virus သတ်ဆေးနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့
oseltamivir(Tamiflu) နှင့် zanamivir(Relenza) ဆိုတဲ့ သောက်ဆေးတွေကိုတော့ အကြံပြုထောက်ခံပါတယ်။ ရောဂါပိုးဟာ ဒီဆေးတွေကို ရင်သွားနိုင်တဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးဖြစ်ပွားနိုင်ချေရှိတဲ့ လူနာတွေအတွက်သာ ဆေးတွေကို ချန်ထားတတ်ကြပါတယ်။ အကယ်၍ မဟုတ်ခဲ့လျှင်တော့ ၀က်တုပ်ကွေးမိတဲ့ လူနာဟာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကျန်းမာတဲ့လူဆိုလျှင်တော့ သူ့ဖာသာ virus ကို ခန္ဓာကိုယ်မှ ပြန်တိုက်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကလောက် ၀က်တုပ်ကွေးက ကြောက်စရာမကောင်းတော့ပေမယ့် သင့်ကိုယ်သင့်မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နိုင်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ရာသီတုပ်ကွေးကဲ့သို့ပင် တချို့လူတွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်ပွားလာနိုင်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ နှစ်တိုင်း တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆိုးထိုးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။၀က်တုပ်ကွေးကလည်း ၄င်းကာကွယ်ဆေးတွေထဲမှာ တစ်မျိုးပါဝင်ပါတယ်။
ထို့ပြင် လူနေထိုင်မှု ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်လည်း သင့်ကိုယ်သင်နှင့် တခြားသူတွေကို အကူးစက်နိုင်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသေးတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ၀က်တုပ်ကွေး ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
• ပြည့်ဝစွာအနားယူပါ။ ထိုသို့အနားယူခြင်းဖြင့် သင့်ရဲ့ ကိုယ်ခံအားစနစ်က ရောဂါကို ကောင်းစွာတိုက်ထုတ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
• ရေနှင့် တခြားအရည်များကို များများသောက်ခြင်းဖြင့် ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်မှုမှ ကာကွယ်ပါ။စွပ်ပြုတ်နှင့် သစ်သီးဖျော်ရည်တွေက ခန္ဓာကိုယ်မှ ဆုံးရှူံးသွားတဲ့ အာဟာရတွေကို ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါတယ်။
• ခေါင်းကိုက်တာ၊ လည်ချောင်းနာတာတွေအတွက် တရားဝင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို ၀ယ်သောက်ပါ။
• လက်ကို ဆပ်ပြာ သို့ လက်သန့်စင်ဆေးတွေ သုံးပြီး မကြာခဏဆေးကြောသန့်စင်ပေးပါ။
• နှာခေါင်း၊ ပါးစပ်နှင့် မျက်လုံးတွေကို မထိမိပါစေနဲ့(virus ပိုးက စားပွဲ၊တယ်လီဖုန်းစတဲ့ မျက်နှာပြင်တွေမှာ ကောင်းစွာ အသက်ရှင်နေနိုင်တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။)
• နေအကောင်းဖျားနာနေလျှင် အလုပ် သို့ ကျောင်းမသွားပဲ အိမ်မှာနေပါ။
• နှာခေါာင်းစည်း မျက်နှာဖုံး facemask တက်ထားပါ။
• ၀က်တုပ်ကွေးဖြစ်နေပြီလို့ သံသယရှိနေလျှင် လူများတဲ့ နေရာတွေကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။
( ဒေါက်တာ ခန့်ဝင်း )
မနက် မိုး စ လင်း ကတည်းက
Viber ကရော FB ကပါ Message ပို့ပြီးလည်းမေးကြပါတယ်.....
ကြောက်လို့ ပါ... စိတ်ပူလို့ ပါ.... စိုးရိမ်လို့ပါ.....
ဘာလုပ်ရမလဲ... ကာကွယ်ဆေး ထိုးချင်လို့.....
ဘာမှန်းအသေအချာ ဂဃနဏ မသိသေးဘဲ
"Flu" အကြောင်းလေး အရင် ပြောပါ့မယ်
"Flu" ဆိုတဲ့ မြန်မာလို အလွယ်ခေါ်ကြတဲ့
တုပ်ကွေးရောဂါ (သွေးလွန်တုပ်ကွေး မပါ ပါ) ဟာ
Virus ပိုးကြောင့် ဖြစ်တာပါ....
Influenza Viruses ကြောင့် ဖြစ်တာပါ
သည် Influenza Viruses ကို
A,B,C,D ဆိုပြီး အမျိုးအစား အုပ်စု
၄ ခု ခွဲပြီး သတ်မှတ်ထားပါတယ်
အုပ်စု A နဲ့ B က ရာသီအလိုက် ဖြစ်ပေါ်ပြီး
အစုလိုက် အပြုံလိုက် ကူးစက်ဖြစ်ပွားစေတယ်
အများအခေါ်ကတော့ Seasonal Flu ဆိုတဲ့
ရာသီဖျား ရာသီပေါ်တုပ်ကွေး ပေါ့....
တစ်ချို့ရာသီတွေမှာ တော်တော်ပြင်းထန် တတ်ပါတယ်.....
အုပ်စု C ကတော့ အပျော့စား အပေါ့စား ဖြစ်ပြီး
လူအများကြား ပြန့်ပွားဖြစ်စေတာမျိုး သိပ်မရှိပါဘူး
ချောင်းဆိုး နှာစေး တာလောက် နဲ့ ပဲ
အုပ်စု D ကတော့ တိရိစ္ဆာန်တွေ မှာပဲ ဖြစ်ပြီး
လူတွေ ဆီ ကူးစက်နိုင်တာမျိုး မရှိဘူးလို့
အခု လူပြောများနေတဲ့ လူသိများနေတဲ့
"H1N1" တို့ "H3N2" တို့ "H5N1" တို့ ဆိုတာ တွေ က
Influenza Type A viruses အုပ်စုဝင်တွေပါ
Influenza Type A viruses တွေရဲ့
Virus တစ်မျိုးချင်းဆီ မှာ
Hemagglutinin ("H") ရယ် Neuraminidase ("N")ရယ်
ပရိုတင်း ၂ မျိုး ပါပါတယ်
"H" က 1 ကနေ 18 အထိ
"N" က 1 ကနေ 11 အထိ ဆိုပြီး
အမျိုးအစား ခွဲ သတ်မှတ်ထားပါတယ်
အဲ့သည့် "H" ရယ် "N" ရယ် အတွဲအစပ်ပေါ် မူတည်ပြီး
မျိုးစိတ်ကွဲတွေ အဖြစ် အမည်ပေး သတ်မှတ်ထားတာပါ
ဒါကြောင့် "H1N1" "H3N2" "H5N1" စသဖြင့် ပြောကြတာပါ
Influenza Type A အုပ်စုဝင်တွေ ချည်းပါပဲ.....
သည် Virus ပိုးတွေရဲ့ ထူခြားချက် က
မျိုးစိတ်ကွဲ တစ်ခု တည်းမှာတင်
Strain လို့ခေါ်တဲ့ မျိုးဗီဇ နည်းနည်း နည်းနည်း ပြောင်းပြီး
ပြီးခဲ့တဲ့ ရာသီ က ပေါ်ခဲ့တဲ့ "H1N1" နဲ့
နောက်တစ်ရာသီ မှာ ပေါ်မယ့် "H1N1"
ဒါကြောင့် အခုရာသီ မှာ Flu ဖြစ်ထားလည်း
နောက်ရာသီ မှာ ထပ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်
အခုရာသီ အတွက် ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားလည်း
နောက်ရာသီ အတွက် ကာကွယ်ချင်မှ ကာကွယ် နိုင်ပါလိမ့်မယ်.....
သည်လောက် အခြေခံ အကြောင်းတရား ပြောထားပြီးရင်
အခု လက်ရှိ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတဲ့ အကြောင်း ကို ပြောပါမယ်
Seasonal Flu ရာသီတုပ်ကွေး ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းထဲမှာ ကို
"H1N1" က ပါပြီးသားပါ
ဒါကြောင့် ပုံမှန် ရာသီတုပ်ကွေး ဖြစ်နေတဲ့ လူနာတွေကို
Rapid Influenza Diagnostic Tests (RIDTs) ဆိုတဲ့
Test နဲ့ စစ်လိုက်ရင်လည်း
"H1N1" တွေ့တယ် ဆိုတဲ့ အဖြေ ထွက်နိုင်ပါတယ်
သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ရာသီပေါ်တုပ်ကွေး Seasonal Flu ပေါ့
ဒါကို Seasonal H1N1 လို့ ပြောကြပါတယ်
ဒါက သိပ်ပြဿနာ မရှိပါ
အနည်းဆုံး ၃ ရက် ကနေ အများဆုံး ၁၀ ရက် ၁၂ ရက်
နာတာရှည်ရောဂါ အခံရှိတဲ့သူတွေ မှာ တော့
ပိုပြင်းထန်ပြီး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရတဲ့ ထိ ဖြစ်တတ်ပါတယ်
(ဒါကတော့ "H1N1" မှ မဟုတ်ပါ).....!
အဓိက ကြောက်ရမှာ စိုးရိမ်မှာ က
လူတွေ အများကြီး အစုလိုက် အပြုံလိုက် ကို
ကပ်ရောဂါ အသွင်နဲ့ ကူးစက်နိုင်ပြီး
ကူးစက်သူ အများစု ကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်
အသက်ဆုံးရှုံးစေတဲ့ အထိ အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့
Novel H1N1 ဆိုတဲ့ အသွင်ပြောင်း H1N1 အမျိုးအစားပါ
ပြောခဲ့သလိုပဲ သူက မျိုးဗီဇ ပြောင်းရင်းပြောင်းရင်း ကနေ
တော်တော် ပြင်းထန်တဲ့ အဆင့် ကို ပြောင်းသွားခဲ့တဲ့ အမျိုးပါ
သူ့ကို Seasonal Flu ရာသီပေါ်တုပ်ကွေးလို့ မသတ်မှတ်ပါ
ကပ်ရောဂါ တစ်မျိုးအဖြစ် သာ သတ်မှတ်ပါတယ်....!
RIDTs ဆိုတဲ့ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှု နဲ့တော့
Seasonal H1N1 ရာသီပေါ်တုပ်ကွေး လား
Novel H1N1 အသွင်ပြောင်း H1N1 လား မခွဲခြားနိုင်ပါ
အဲ့သည်လို ခွဲနိုင်ဖို့က တစ်ခြား အထူးပြုထားတဲ့
စစ်ဆေးမှုတွေ ထပ်လုပ်ဖို့ လိုပါသေးတယ်....!
ခု ကာကွယ်ဆေး အကြောင်းလေး နည်းနည်း ထပ်ပြောပါမယ်
အခု လက်ရှိရာသီ အတွက် ထုတ်ထားတဲ့
Flu Vaccine တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး မှာ
Influenza Type A အုပ်စုဝင်
Seasonal H1N1 ( ရာသီပေါ် H1N1)ရယ် H3N2 ရယ်
Influenza Type B အုပ်စု ရယ် အတွက်
ဒါပေမယ့် Novel H1N1 ဆိုတဲ့ အသွင်းပြောင်း H1N1
(အခု အသွင်းပြောင်း H1N1 က
ဘယ်လို အသွင်ပြောင်းနေမှန်း စောင့်ကြည့်နေဆဲ
ဖြစ်တဲ့ အတွက် အသေအချာ မပြောနိုင်တာပါ)
ကဲ သည်တော့ ပြန်ချုပ်ရရင်
"H1N1" တွေ့ပြီ ဆိုတာ နဲ့
အလွန်အမင်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့် စရာ မလိုပါဘူး
Seasonal H1N1 ရာသီပေါ်H1N1 ဆိုရင်
တုပ်ကွေး ဖြစ်နေတဲ့ သူသူကိုယ်ကိုယ်မှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်
ကိုယ်ခံအား မကောင်းတဲ့ သူတွေက လွဲရင်
သာမန်အားဖြင့် အသက်အန္တရာယ် မရှိတတ်ပါဘူး
Novel H1N1 အသွင်ပြောင်း H1N1 ဆိုရင်တော့
ကပ်ရောဂါ အသွင် ဖြစ်ပွားပြီး
ပြင်းထန်မှု က အသက်အန္တရာယ် ရှိပါတယ်
ဒါကြောင့် ခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ က
Seasonal H1N1 ရာသီပေါ်H1N1 လား
Novel H1N1 အသွင်ပြောင်း H1N1 လား
အခုထိုး အခုထပြီး မကာကွယ်နိုင်ပါ
ဆေးထိုးပြီး အနည်းဆုံး ၂ ပတ်ကနေ ၃ ပတ် အကြာမှ
စပြီး ကာကွယ်မှု ရနိုင်မှာပါ
ဒါတောင် Seasonal H1N1 အတွက်ပဲ သေချာနိုင်ပါမယ်...
လက်ရှိ တစ်ရာသီ အတွက်ပဲ ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်...!
အခုလို ဈေးကွက် ထဲ မှာ
ကာကွယ်ဆေး လက်ကျန် နည်းနေတဲ့ အချိန်
ကြောက်လန့်တကြား နဲ့ကာကွယ်ဆေး ပြေးထိုးဖို့ လုပ်နေကြတာ
တစ်ချို့နေရာ တွေ မှာ ၄-၅ ဆ လောက်
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ တွေ ကနေ မှာ ပြီး ထိုးဖို့ စီစဉ်နေကြတာတွေ
ကာကွယ်ဆေး မရလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြတဲ့သူတွေ
စသဖြင့် လှမ်းလှမ်း မေးနေကြပါတယ်
အဲ့သည်အတွက် ဖြေပေးချင်တာ က
သင့်တင့်တဲ့ ဈေးနှုန်း နဲ့ အခက်အခဲ မရှိ ဝယ်လို့ရနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ ထိုးပါ
ဒါပေမယ့် ရာသီပေါ်တုပ်ကွေး ကိုပဲ ကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်
အသွင်ပြောင်း H1N1 ကာကွယ်ဖို့ အတွက် မသေချာပါ
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ က နေ
Hand-Carry ဖြင့် တရားမဝင် မှာပြီး ထိုးတာဟာ
အပူချိန်ထိန်းသိမ်းမှု ကာကွယ်ဆေး ထားသိုမှု
မမှန်နိုင်တာကြောင့် ဆိုးကျိုးတောင် ပိုများနိုင်ပါတယ်
ထိုးရင်လည်း လူကြီးအတွက် နဲ့ ကလေးအတွက် ဆိုပြီး
အသက် ၃ နှစ် အထက် အတွက် နဲ့
အသက် ၆ လ ကနေ ၃ နှစ် အထိ ဆိုပြီး
၂ မျိုး ခွဲထားတာ သတိပြုကြပါ
ထိုးရန် ကာကွယ်ဆေး အရည်အတွက်နည်းနေပါက
ကလေးများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ နာတာရှည်ရောဂါသည် များအား
မိသားစု ကိုလည်း မထိုးပေးထားရသေးပါ
ခုလည်း မရအရ ရှာပြီး မထိုးတော့ပါ
တကယ်လိုတဲ့ သူတွေ ရကြပါစေလား
အကောင်းဆုံး ကာကွယ်နည်းလည်း ရှိနေပြီးသားပါ
သာမန် Seasonal H1N1 ရာသီပေါ် H1N1 ဖြစ်ဖြစ်
အသွင်ပြောင်း H1N1 ဖြစ်ဖြစ်
လူလူ ချင်း ကူးစက်တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
ဖြစ်နိုင်ရင် လူထူထပ်တဲ့ နေရာ မသွားပါနဲ့....
သွားရရင် လည်း နှာခေါင်းပါးစပ် အုပ်နိုင်သော MASK တပ်သွားပါ.....
Hand sanitizer disinfectant လိုမျိုးဆောင်ထားပြီး
ကျန်းမာရေးဌာန တွေ က
သေချာတဲ့ သတင်းတွေ ကို နားစွင့်ပါ......
(ကျန်းမာရေးဌာန တွေ ကလည်း
သေသေချာချာ ကွဲကွဲပြားပြား ထုတ်ပြန်ပေးစေလို)
ရာခိုင်နှုန်း အများကြီး ပိုကာကွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်......!
(ဆေးပညာပေး ဆောင်းပါး မဟုတ်ပါ
စိတ်ပူ ပြီး လှမ်းမေးနေကြတဲ့ အတွက်
စာရိုက်ရတာ ပျင်းပြီး မကျွမ်းကျင် တဲ့ အတွက်
ခုမှ တင်လိုက်ရတာ ပါ
နောက်ဆို Video ရိုက်ပြီး Live တင်ရရင် ကောင်းမလားပဲ..... )
ဘာကို စိတ်ပူရမယ် ဘာ လုပ်ရမယ်ဆိုတာ
နည်းနည်းတော့ သဘောပေါက်လောက်ကြပြီ ထင်ပါတယ်.....
ဘာကိုလုပ်ရမလဲတော့ သိကြပါ လို့သာ......!!!!!
ကိုယ့်ရဲ့ email လိပ်စာကို အတင်းတောင်းတာ/
Email ကနေ ပြန်ဆက်သွယ်ပါဆိုပြီး ပြောတာတွေက
ဘာ လုပ်တာလဲ ? ဘာဖြစ်တတ်လဲ ?
( ညီ တစ်ယောက် မေးလာလို့
အတိုချုံး ဖြေပေးလိုက်တာပါ ။ တခြား လူတွေလည်း သတိထားနိုင်အောင် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ )
၁။ ညီ့ email လိပ်စာကို သူ ရသွားမယ်
၂။ အဲ့ လိပ်စာကို သူက နောင်ထပ်စာတွေပို့ပြီး
ညီ့ကို လိမ်ဖို့ လုပ်မယ် /
ဒါမှမဟုတ် ညီ လိုလို မလိုလို
သူ ရောင်းချင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ ကြော်ငြာတွေ ပို့မယ် ။
( Spamming လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် )
၃။ သူ့လိုပဲ လိုက်လုပ်နေတဲ့
တခြား လူနဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို
ညီ့ email လိပ်စာကို ထပ်ရောင်းမယ် ။
ဒီတော့ သူ့ကို စ ပေးလိုက်တာနဲ့
တခြား ကိုယ် မသိတဲ့ လူတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေက ပါ
ကိုယ့်ဆီကို Email တွေ ဝိုင်းပို့ကြလိမ့်မယ် ။
၄။ စမ်းကြည့်ချင်ရင် ကိုယ် တကယ် ရေရှည်မသုံးတဲ့ mail လိပ်စာ တစ်ခုပေးလိုက်ပြီး စောင့်ကြည့် ကြည့်ပါညီ
မင်္ဂလာ နှစ် သစ် ဖြစ်ပါစေဗျာ ။
နှစ်သစ် ဖြစ်ပါစေ ။
အခွင့်အရေး က တံခါး လာမခေါက် ဘူးလား ?
ကိုယ်တိုင် တံခါး ဆောက် လိုက် လေ ...
If the opportunity doesn't knock ,
buildadoor !
< Milton Berle >
< Adapted by ကိုဇင်ဇေ >
Duwun Talks - Branding in the world of Entrepreneurship
အချိန်ရရင် ၊ ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ဖို့လည်း စိတ်ဝင်စားရင်
ဒီပွဲကို လာရောက် လေ့လာနားထောင်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ ။...
စာရင်း ကြိုပေး စရာမလို ပါဘူးတဲ့ ။
စောစောလာတဲ့လူတွေကို ဦးစားပေးပြီး ဝင်ရောက်နားထောင်စေမှာပါ ။
( Facebook - Live လည်း လွှင့်ပါလိမ့်မယ် ။ )
Duwun Talks : Branding in the world of Entrepreneurship
Date - 29th January 2017
Time - 4PM - 6PM
Location - Park Royal Hotel, Yangon
Duwun Talks ဆိုတာ... Duwun ကနေပြီး စီစဉ်ပြုလုပ်နေကြဖြစ်တဲ့
Entrepreneurship ပိုင်းဦးစားပေး စကားဆွေးနွေးဟောပြောပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
စကားဝိုင်းမှာ အတွေ့အကြုံရှိ လုပ်ငန်းရှင်ပညာရှင်များမှ ခေါင်းစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး
သူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်များကို တင်ပြဆွေးနွေးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ယခုတစ်ကြိမ်ဟာ Duwun Talks စတုတ္ထမြောက် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီး
Chivas Venture နှင့်ပူးပေါင်းကာ
BRANDING in the world of Entrepreneurship ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို
29.1.2017 ရက်နေ့ ညနေ ( ၄ နာရီ မှ ၆ နာရီ ) အတွင်း မှာ ကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပွဲမှာ Moderator အဖြစ်
Author, "Active English" Training Center ရဲ့
Founder ဖြစ်သူ ကိုဇင်ဇေက ပါဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီး ပါဝင်ဆွေးနွေးမည့်သူများအနေဖြင့်
-Diverse Agency & 90's Kids ရဲ့ Co-founder ဖြစ်သူ ကိုရန်နိုင်ဦး၊
-"Tree Food" ရဲ့ Founder နဲ့ Owner ဖြစ်သူ ဒေါက်တာချိုလဲ့အောင်နဲ့
-Yangon Waterboom မှ Head of Sales & Marketing ဒေါက်တာဖြိုးမင်းနိုင်တို့မှ
Speaker အဖြစ် ပြောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
( ဓာတ်ပုံတွေမှာ တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပါ ဖော်ပြပေးထားပါတယ် ။ )
Zin Zae Lwin added5new photos — with Yan Naing Oo and2others.
ဒီပွဲကို လာရောက် လေ့လာနာ...းထောင်ဖို့ ဖိတ်ပါတယ်ဗျာ ။
သင် MLM ဝင် မလုပ်သင့်ရခြင်း အကြောင်းရင်း ၂၁ ချက်
MLM / Network Marketing ( ဆင့်ပွါး ၊ ကွန်ရက် ဈေးကွက် ထိုးဖောက်ခြင်း ) လုပ်ငန်းကို လေ့လာကာစ လူ တစ်ယောက်ကို
MLM လုပ်ငန်း ကြောင့် နစ်နာမှာစိုးလို့...
အလုပ် တစ်ခု လုပ်တဲ့အခါ . . .
သူများ အထင်ကြီးဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ် အားရစေဖို့သာ လုပ်ပါလေ ။
Don't do it to impress someone .
Do it to satisfy yourself.
( Anonymous - DevRange Page)
မနက်ဖြန် ကိုဂျိုးဇက် ရဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေကို တောင်းပန်တဲ့ပွဲမှာ
Aimstar ( MLM Company ) ကြောင့် နစ်နာဖူးတဲ့
ဒီ ဦးလေးကြီးလို လူပေါင်းများစွာ အတွက်
AimStar က တာဝန်ရှိသူတွေကို ...
တစ်ခုခု မေးခဲ့ပေးပါဗျာ ။
Posted by Zin Zae Lwin
Zin Zae Lwin
October 7, 2016 · Yangon, Myanmar ·
ဒီ ဦးလေးကြီးလို လူပေါင်းများစွာ... အတွက်
AimStar က တာဝန်ရှိသူတွေကို
( ၂ မိနစ်ခွဲစာ ဗီဒီယိုလေး ပါ )
ကျွန်တော့် သင်တန်းသားတွေနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို
MLM Companies တွေရဲ့ သားကောင် မဖြစ်စေချင်လို့
ဒီ Post ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
MLM Companies များကြောင့် နစ်နာခဲ့သူများ နှင့် MLM စနစ်ကို ဆန့်ကျင်သူများ...
( https://www.facebook.com/groups/myanmarmlmtruth/ )
Group နာမည် အတိုင်းပါပဲ ။
ဒီ Group ထဲမှာ
၁။ MLM Companies တွေမှာ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖူးပြီး
ဒီ MLM Companies တွေကြောင့် ငွေကြေး ၊ အချိန် ၊ လူမှုရေး ၊
သိက္ခာ အစရှိသဖြင့် တစ်ခုခု နစ်နာခဲ့ဖူးသူတွေနဲ့
၂။ MLM Companies တွေမှာ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် မလုပ်ကိုင်ဖူးသော်လည်း
ကိုယ့်ရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူ အချို့ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်လို့ နစ်နာမှုတွေ ရှိခဲ့ရတာကို
၃။ MLM Companies တွေမှာ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ဖူးပြီး
MLM Companies / MLM System နဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သိလို့ စွန့်ခွါလာခဲ့ပြီး
MLM စနစ်ကို အတိအလင်း ဆန့်ကျင်သူတွေ
၄။ MLM Companies တွေမှာ ကိုယ်တိုင် ဝင်ရောက် မလုပ်ကိုင်ဖူးသော်လည်း
မိမိရဲ့ လေ့လာသုံးသပ်ဆင်ခြင်မှုအရ MLM စနစ်ကို
အတိအလင်း ဆန့်ကျင်သူတွေ ( အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင်တွေ )
ပါဝင် ဆွေးနွေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
MLM ကြောင့် အများပြည်သူ ဆုံးရှုံးနစ်နာနေရတာကို မကြည့်ရက် ၊ မနေသာသူများ အနေနဲ့
MLM သားကောင် ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ နောက်ထပ် လူပေါင်းများစွာကို
သက်သေ သာဓကများနဲ့ အသိပညာပေး ကာကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ် ။
( https://www.facebook.com/groups/myanmarmlmtruth )
အပြင် စီးပွါးရေးလည်း MLM ( Multi-level Marketing ) လို
Pyramid ပါပဲ ဆိုသူများ အတွက်
( ကျွန်တော့် သင်တန်းသားတွေ / စာဖတ်သူတွေကို ဖြစ်နိုင်ရင် MLM လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ...
လုံးဝ မပတ်သက်စေချင်လို့ ဒီ Post ကို တင်ပေးလိုက်တာပါ ။
သင့်ကို MLM သမားတစ်ယောက်က MLMဟာ အခွင့်အရေးကောင်းလို့ပြောပြီး
လာခေါ်နေတယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်း ၁၀ ခွန်းကို မေးကြည့်လိုက်နိုင်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် မေးထားတဲ့စာသားအတိုင်းပဲ တင်လိုက်တာမို့လို့
" ညီ " လို့ သုံးနှုန်းထားတာကို သည်းခံပေးစေလိုပါတယ် ။ )
တည်ဆောက်ပုံက ပိရမစ်ပုံ ဖြစ်နေတိုင်း
အပြင်စီးပွါးရေးတွေဟာလည်း လိုပါပဲလို့ ယူဆလို့မရဘူးညီရ ။
အပြင်စီးပွါးရေးမှာ အဆင့်တိုင်း အဆင့်တိုင်းဟာ
သူ့ အရည်အချင်းနဲ့ သူ ထိုက်သင့်သလောက် ခံစားခွင့်တွေရကြတယ် ။
MLM မှာက အောက်ကလူတွေက အဲ့လောက်ကို မရတာ ။
ညီ အနေနဲ့ အချက်အလက်နဲ့ တိတိကျကျ ဆက်ပြောမယ်ဆိုရင်
အဲ့ကိစ္စ ဆက်ဆွေးနွေးပါ့မယ် ။
၁။ ညီ MLM လုပ်တာ ဘယ်လောက် ကြာပြီလဲ ?
၂။ ထုတ်ကုန် ဘယ်လောက်ဖိုး ဝယ်ရင်းပေးထားရလဲ ?
၃။ အဲ့ဒီ လို ဝယ်ရင်းလိုက်ရတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေထဲမှာ
ဘယ် နှရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲ ရောင်းထွက်ပြီး
ဘယ်နှရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်သုံးတာ ၊
လက်ဆောင်ပေးတာတွေ လုပ်လိုက်ရသလဲ ?
၄။ ကွန်ရက် ရဲ့ လူပွါးနှုန်းကရော Company ကို အသင်းမဝင်ခင်တုန်းက
အားရစရာ တွက်ပြသလို ဆပွါး နှုန်းနဲ့ တက်နေရဲ့လား ?
၅။ လစဉ် MLM အတွက် ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့ သွားခ ၊ လာခ ၊ ဖုန်းခ ၊
အင်တာနက်ခ ၊ ကျွေးမွေးခ ၊ စာရွက်စာတမ်းနဲ့ သင်တန်းခ စတာတွေ ဘယ်လောက်လောက် ရှိလဲ ?
၆။ MLM က ရတဲ့ ဝင်ငွေက အဲ့လို လစဉ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့
ငွေကိုရော ကျော်နေပြီလား ? အမြတ် ထွက်ရဲ့လား ?
၇။ ညီက ကျော်အောင် ရှာနိုင်နေတယ်ဆိုရင်
ညီအောက်က ဝင်လာတဲ့လူတွေရော အဲ့လို ကျော်ရဲ့လား ?
၈။ လစဉ် အရှုံးပြနေလား ?
အဲ့လို ရှုံးနေတဲ့လူနဲ့ မြတ်နေတဲ့လူ အချိုးအစား
ညီ့ ကွန်ရက်ထဲမှာ ဘယ်လောက်ရှိနေလဲ ?
( Company တစ်ခုလုံးဆိုရင် ခက်မှာစိုးလို့ ဒါကိုပဲ အရင်တွက်ကြည့်ပါဦး )
၉။ လူ့ အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပိုပြီး ကိုယ့်ကို လူတွေ အထင်ကြီးလေးစားလာလား ?
MLM လို့ စကားစလိုက်တာနဲ့ ကျဉ်တာ ခံနေရလား ?
နယ်ကျယ်သွားလား ? ကျဉ်းသွားလား ?
၁၀။ MLM ကို အချိန်ပေးနေမိလို့ တခြား အခွင့်အလမ်းနဲ့ ပညာရပ်ကောင်းတွေ လေ့လာဖို့
အချိန်တွေ ၊ အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးနေလား ?
စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ညီ အရင် ရိုးရိုးသားသား ဖြေကြည့်ပါ ညီ ။
ပြီးရင် အကိုတို့ ဆက် ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ ။
Admin @ MLM/Network Marketing အကြောင်း အသိပညာပေး ၊ ဆွေးနွေးချက်များ
Group >>> https://www.facebook.com/groups/mlmDiscussion/
တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့ ပညာ၊စီးပွါး၊အလုပ် ရှာဖွေနေသူ မြန်မာ တိုင်း အတွက် sharedagroup.
Active Readers အသင်းဝင်တွေ အနေနဲ့
စာဖတ်ခြင်း နဲ့ တိုက်ရိုက်မပတ်သတ်တဲ့
အခြား ဗဟုသုတ ရစရာတွေ
မိမိရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေးအခေါ် ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ကို
စုတင်ချင်ရင် ... Share ချင်ရင်......
အောက်ပါ လင့်က Group လေးမှာ တင်ပေးကြမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
မိမိရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေးအခေါ် ၊ အတွေ့အကြုံတွေ ကို မျှဝေလိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊
သူ တပါးဆီကနေ ရယူလိုရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီ အဖွဲ့လေးကနေ ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ ။
Active Readers စာဖတ်အသင်းဝင်တို့ ၏ အတွေ့အကြုံ နှင့် အတွေးအခေါ် မျှဝေမှုများ
Steve Jobs ရဲ့ သံဝေဂ ရစရာ နောက်ဆုံး စကား အစစ်ဟာ .....
အရင်းခံ ခံယူချက် မှန်ထားဖို့ လိုတယ် ...
ခံယူချက်မှန်မှ ... လုပ်ရပ်မှန်မှာ ။
လုပ်ရပ်မှန်မှ ... ရလာဒ်မှန်မှာလေ ။
အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ FTC က
Herbalife ( MLM Company ) ကို တရားစွဲဆို အနိုင်ရလိုက်ပြီ
အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ MLM ( Multi-level Marketing ) လုပ်ငန်းကြောင့် ...